Arday Soomaali ah oo Ku Go’doonsan Gobolka Tigray - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
Arday Soomaali ah oo Ku Go’doonsan Gobolka Tigray
November 21, 2020 at 05:53 Arday Soomaali ah oo Ku Go’doonsan Gobolka Tigray2020-11-21T05:53:16+02:00 WARARKA SOOMAALIYA
MUQDISHO(HALBEEG)-Waxaan muddo laba todobaad ah wax war iyo wacaal toona laga heynin qiyaastii 50 arday oo Soomaali ah oo la sheegay in ay ku go’doonsan yihiin gobolka Tigray ee ay dagaalladu ka socdaan dalka Itoobiya.
Ardaydan ayaa qaarkood waxa ay deeq waxbarasho ku dhiganayeen jaamacada Mekele ee caasimada gobolka Tigray.
Khadka taleefanka iyo internet-ka gobolkaas oo go’an awgood ayaa sii kordhiyay walwalka ehellada ardaydan.
Mid ka mid ah ehellada ardayda Soomaalida ah oo la hadlay VOA ayaa sheegay in aanay wax war ah ka haynin wiilkooda tan iyo markii uu billowday dagaalka ka socda gobolka Tigray.
Sidoo kale waxa uu sheegay in xariir ay la sameeyeen safaaradda Soomaalida iyo Hay’adda ICRC balse aanay iyaguba aanay wax xog ah ka haynin dhallinyaradaas ardayda ah.
Isgaarsiinta go’an ee gobolka Tigray ayaa walaac ku abuurtay beesha caalamka oo uu Mareykanku ka mid yahay iyo waliba hay’adaha ka shaqeeya arrimaha gargaarka bani aadannimo oo aan xog badan ka haynin waxa ka socda gobolka Tigray iyaga oo sheegay in ay sii wadayaan in ay dowladda Itoobiya ku cadaadiyaan in ay sii deyso Khadka isgaarsiinta gobolka.
Qaramada Midoobay ayaa iyaduna dowladda Itoobiya ka codsatay in ay sii deyso Khadka isgaarsiinta sidoo kalena furto dhabbe gargaar bani-aadannimo lagu gaarsiin karo dadka nugul ee ku sugan gobolka colaaddu ka holcayso ee Tigray ee waqooyiga Itoobiya.
Kumannaan qaxooti ah oo ka cararay dagaalka gobolka Tigray ayaa magangalyo u raadsaday dalka Suudaan iyada oo ay sii badanayso cabsida laga qabo xaalad bani aadannimo oo ka dhalata dagaalka gobolka Tigray.
« Ciidamada dowladda Itoobiya oo la wareegay magaalooyiin muhiim ah
Curadka Madaxweyne Trump oo Laga Helay Xanuunka COVID-19 »